ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအနေဖြင့် လိုအပ်သည့် ဂျပန်ဘာသာအဆင့်က? | Japan Care Worker Guide
ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှဝန်ထမ်းများသည် ဂျပန်လူမျိုးအများစုဖြစ်ပြီး အဆိုင်းလဲသောအချိန် သတင်းပို့ရာတွင်လည်း ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဂျပန်စာများသည့်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းသည် အလွန်ပင်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကိုလိုအပ်နေသည့်သူများသည်လည်း အများစုမှာသက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်သောကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းသည့်သူနည်းပါးသဖြင့် သေချာပေါက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းမရှိလျှင် ပြောဆိုဆက်ဆံ၍မရနိုင်ပေ။ “ဂေဟာမှာရှိတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဂျပန်လိုပြောတယ်။ ဂျပန်စာကိုလေ့လာရင်လေ့လာသလောက် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတယ်။ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းချက်ဝါကျတွေကိုဖတ်တဲ့အခါ အဘိဓါန်နှင့် ဘာသာပြန်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ မကြာခဏအသုံးပြုဖြစ်တာကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲက အဘိဓါန်အပလီကေးရှင်းပါ။ ဘိုးဘွားတွေပြောနေတာကိုနားမလည်တဲ့အခါမျိုးမှာ လွယ်ကူတဲ့ဂျပန်စာနှင့် နောက်တစ်ခါပြန်ပြောစေတာတို့၊ တခြားဝန်ထမ်းတွေဆီကနေ အကူအညီ ယူတာတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဗီယက်နမ်မှ မစ္စ ဟုန်သီငုပ်အန်းက ပြောပြပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်သောအခါ ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းသည် အလွန်အရေးပါသည့် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်၍သေသေချာချာ လေ့လာသင်ယူ ထားရန်မှာ အရေးကြီးလှပါသည်။
ဂျပန်သို့မလာခင် အချိန်မည်မျှကြာအောင် ဂျပန်ဘာသာစကားကို သင်ယူလေ့လာခဲ့ သလဲ?
ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်မှာ ဂျပန်ဘာသာနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရခြင်းမှာအရေးပါကြောင်း သိရှိ နားလည်ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ပထမဦးဆုံးဂျပန်သို့ရောက်လာပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည့်သူများက အချိန်ဘယ်လောက်ကြိုတင်ပြီး ဂျပန်ဘာသာစကားကို လေ့လာခဲ့ကြ ပါသလဲ။ လူအပေါ်မှာမူတည်ပြီး လေ့လာသင်ယူသောအချိန်ကွာဟမှုတော့ရှိနိုင်သော်လည်း ဂျပန်ဘာသာလေ့လာခြင်းအား စိတ်ပါလက်ပါနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မလာခင် နှစ်ဝက်လောက်မှတစ်နှစ်ခန့်အထိဟုဆိုသောသူများပါသည်။ သို့သော် ဂျပန်ဘာသာ စာမေးပွဲမအောင်မြင်လျှင်တော့ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်၍မရနိုင်သော အခြေအနေမျိုးလည်းရှိ သည့်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်တွင် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသည့်နေ့မှစတင်၍ ဂျပန်စာနှင့် အသားကျရင်းနှီးသွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဟာ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဟု ထင်ပါသည်။
ဂျပန်သို့လာပြီး မည်မျှလောက်အကြာမှာ ဝေါဟာရများနှင့်အသားကျနိုင်ပါသလဲ?
“ဂျပန်မှာပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလုပ် စတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက နားမလည်တဲ့ဝေါဟာရတွေ ရှိခဲ့တယ်။ စ,စချင်းကတော့အားနာမိပြီး နားမလည်တာကိုနားမလည်ဘူးလို့မပြောရဲဘဲ ရယ်ပြီး ရောချလိုက်ရတာတွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စကားဆိုတာကလည်း အလုပ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့အချိန်မှာ ဘိုးဘွားတွေရဲ့အသက်နှင့်ဆက်နွယ်နေတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အခြား ဝန်ထမ်းဆီမှာသေသေချာချာမေးပြီး ရှင်းပြခိုင်းခဲ့ရတယ်” ဟု ပြောပြပေးခဲ့သူကတော့ အင်ဒိုနီးရှားမှ မစ္စ ရစ္စဝန်တီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာ ဖိလစ်ပိုင်မှ မစ္စတာ အဲလ်ဘတ် ဖာနန်ဒက်ဇ်က “ဂျပန်ကိုရောက်ခါစ ၃လလောက်မှာ ဂျပန်စာကိုချောချောမွေ့မွေ့မရခဲ့ဘူး။ လွယ်ကူတဲ့ ဝါကျလောက်ကိုတော့ရေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် စကားပြောကိုတော့မရခဲ့သေးဘူး။ ပြောကောင်းပြောနိုင် ပေမယ့် ယုံကြည်မှုမရှိလို့ ပြောမထွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်မလားတော့မသိဘူး။ နောက်ပြီး ဂျပန်စာကို လေ့လာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတုန်းကမသင်ယူခဲ့ရတဲ့ အရေးကြီးဝေါဟာရအများကြီးကိုလည်း အလုပ် မှတဆင့်သင်ယူခဲ့ရပါတယ်” ဟု ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။
လူအပေါ်မူတည်ပြီး ဂျပန်ဘာသာစကားကိုအသားကျဖို့အချိန်ကာလဟာ ကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် အကြမ်းအားဖြင့် စ,စချင်း ၃လမှ ၆လခန့်ဟာ ပင်ပန်းခက်ခဲသောအချိန်ကာလဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှာ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အသားကျလာသူများသည်ဟုဆိုပါသည်။ အစဦးဆုံးသူများနိုင်ငံ၏ရေမြေမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ရော ပင်ပန်းလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ သို့သော် ဂျပန်လူမျိုးများဟာ အခြေခံအားဖြင့် သဘောကောင်းကြင်နာတတ်သောသူများသည့်အတွက် နားမလည်သောအရာ ရှိပါက ချက်ချင်းပဲမေးမြန်းပြီး ဝေါဟာရစကားလုံးများကို ရင်းနှီးသွားအောင်ပြုလုပ်သွားကြပါစို့။
နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဂျပန်ဘာသာစကား၏မည်သည့်အပိုင်း (အဖတ်၊ အရေး၊ နားထောင်) ဟာ အခက်ခဲဆုံးဟုခံစားရပါသလဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသောသူများထံ အင်တာဗျူးပြုလုပ်နေရင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိုအရာမှာ ခက်ခဲသည့်အရာထဲတွင် “ဒေသိယစကား” ဟုဖြေဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် တောင်မြောက် ရှည်လျားသောကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် အမှန်ပင်ဒေသိယစကားများစွာရှိပြီး ယခုထက်တိုင် သုံးစွဲလျှက်ရှိသည်။ အားလုံးလည်းသိရှိထားပြီးသည့်အတိုင်း “ကျိုတို” နှင့် “အိုဆာကာ” မှာလည်း ဒေသိယစကားရှိပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းတွင် ယခုကဲ့သို့သောအဖြေများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
・“ခန်းဆိုင်းစကားပေါ့နော်။ ကိုးဘေးမြို့ရဲ့ဂေဟာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက ဝန်ထမ်းတွေရော ဂေဟာက စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေရောက ခန်းဆိုင်းစကားကိုပဲသုံးကြပြီး စ,စချင်းတုန်းက ဘာကိုပြောနေလဲဆိုတာ နားမလည်ခဲ့ဘူး”
・“ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဂေဟာကစောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေဟာ အိုခယာမစကားနှင့်ပြောကြတဲ့အတွက် ဘာကိုပြောနေလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်မနှင့်နိုင်ငံအတူတူကလာခဲ့တဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းဆီက အကူအညီယူခဲ့ရတယ်”
အခြေခံဂျပန်ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးအဖတ်တွင်နားမလည်ပါက စမတ်ဖုန်း၏ အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြု၍ ရှာဖွေကြသူများသည်ဟုသိရပါသည်။ နည်းပညာတိုးတက်လာမှုအရ ဝေါဟာရအတားအဆီးနံရံကြီးလည်း တဖြည်းဖြည်းနိမ့်ဆင်းလာခဲ့သည်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံရှိသော နိုင်ငံခြားသားများထံမှ အောက်ပါ အကြံဉာဏ်များလည်းရရှိခဲ့ပါသေးသည်။ ဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာရာတွင် အတုယူကိုးကားနိုင်ပါ သည်။
・“မိမိကစပြီး သွက်သွက်လက်လက်နှင့်စကားစ,ပြောပါတယ်။ သဒ္ဒါတို့၊ “မှားပြောမိရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ” တို့ အဲဒါတွေကိုစိတ်ထဲမထားဘဲ လောလောဆယ်တော့ စကားပြောရပါမယ်။ ကာတွန်း၊ အန်နီမေးရှင်းတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတော့ ကာတွန်းဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကာတွန်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ချင်း တူတဲ့အန်နီမေးရှင်းကိုကြည့်တာ ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကာတွန်းကိုဖတ်ပြီးမှ အန်နီမေးရှင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် စကားပြောအကြောင်းအရာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ နားလည်လာလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးငယ်လေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလည်း ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို နေ့စဉ်စကားပြောတွေမှာ အသုံးများတဲ့ဝေါဟာရ စကားလုံးတွေများတဲ့အတွက် သဘာဝကျတဲ့ဂျပန်စကားကို ပြောဆိုလာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ (ဂျပန်စာတွင် မိန်းကလေးအသုံးအနှုန်းနှင့် ယောက်ျားလေးအသုံးအနှုန်းဟူ၍ရှိပါသည်) သင်တန်းပို့ချရာမှာ ဂျပန်စာရဲ့သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရတွေကို သင်ယူလေ့လာရပေမယ့် စာအုပ်ကြီးဆန်ပြီး သဘာဝဆန်တဲ့ဂျပန်စာဖြစ်ဖို့အထိကတော့ အချိန်ကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်” (အင်ဒိုနီးရှားမှ မစ္စ ရစ္စဝန်တီ)
・“ဂျပန်စာကို မြန်မြန်နှင့်ကျွမ်းကျင်လာဖို့အတွက် ဖန်တီးမှုတွေနှင့် နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ နေ့တိုင်း ဂျပန်စာကိုနားထဲစွဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပါ။ NHK သတင်း၊ အန်နီမေးရှင်း၊ ဂျပန်သီချင်း၊ ဇာတ်လမ်းတွေကို နားကနေနားထောင်၊ ပါးစပ်ကနေလိုက်ပြောပြီး မသိတဲ့စကားလုံးတွေ ပါလာပြီဆိုရင် မှတ်သားပြီးအလွတ်ကျက်ပါမယ်။ ဂျပန်ကိုမလာခင်မှာ သင်ယူခဲ့ရတဲ့ဂျပန်စာနှင့် လက်တွေ့အလုပ်မှာအသုံးပြုရတဲ့ဂျပန်စာမှာ ကွဲပြားမှုတော့ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံးဝေါဟာရနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဝေါဟာရကို သတိထားပြီး လေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင် အလုပ်မှာ အစတည်းကအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်” (ဗီယက်နမ်မှ မစ္စ ဟုန်သီငုပ်အန်း)